မြန်မာနဲ့ ဂမ်ဘီယာအမှု ICJ လက်ခံစီရင်ခွင့်မရှိသလို ဂမ်ဘီယာကလည်း စွဲဆိုခွင့်မရှိ ( မြန်မာကိုယ်စားလှယ်)
နယ်သာလန်နိုင်ငံ သဟိဘ်မြို့ ICJ တရားရုံးမှာ ဂမ်ဘီယာနဲ့ မြန်မာအမှု ကြားနာပွဲအတွင်း ICJ အနေနဲ့ ဒီအမှုကို လက်ခံ စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိသလို ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့လည်း တင်ပြစွဲဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ မြန်မာဖက်က ချေပသွားပါတယ်။ ဗွီအိုအေ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း ကို တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာ ဒေါ်ခင်မျိုးသက် က မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ရက်နေ့ သောကြာနေ့က နယ်သာလန်နိုင်ငံ သဟိဘ်မြို့ ICJ တရားရုံးမှာ ဂမ်ဘီယာ နဲ့ မြန်မာအမှု တတိယနေ့ ကြားနာပွဲအတွင်း ICJ အနေနဲ့ ဒီအမှုကို လက်ခံ စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိသလို ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့လည်း တင်ပြစွဲဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ မြန်မာဖက်က ချေပသွားပါတယ်။ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယနေ့ကြားနာပွဲမှာတော့ မြန်မာဖက်က ဘယ်လိုချေပခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဗွီအိုအေ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း ကို တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာ ဒေါ်ခင်မျိုးသက် က မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် (တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာ ၊ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ) ။. ။ အဓိက မြန်မာဖက်က ဘာတွေ လျှောက်လဲခဲသလဲ ဆိုတာ ပထမဆုံး ပြောပြပေးပါ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း (ဌာနမှူး၊ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း) ။. ။ ဟုတ်ကဲ သောကြာနေ့ကတော့ ဗမာဖက်က ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ အဆုံးသတ် လျှောက်လဲချက်ပါ။ ပထမဦးဆုံး ၂၁ ရက်နေ့က လျှောက်လဲချက်တွေမှာ အချက် ၄ ချက်ကို ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါပြီးတော့ ဂမ်ဘီယာဖက်ကနေ ပြန်လည်ချေပတယ်။ အခု ဗမာဖက်က အဆုံးသတ်လျှောက်လဲချက်မှာတော့ အဓိကအားဖြင့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုလှိုင် ရဲ့ တင်ပြချက်အရဆိုရင်တော့ ၂ ချက်ပဲ။ ICJ တရားရုံးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ ချွင်းချက်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ပုဒ်ခွဲ၈ အရ ဒါက လက်ခံနိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ရယ်။ နံပတ် ၂ အချက်က ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့လည်း မြန်မာနိုင်ငံကို စွဲချက်တင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်။ ဒီ ၂ချက်ကိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံက ငြင်းပြီးတော့ ICJ အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ သီးသန့်လျှောက်လွှဲခဲ့တာပါ။ အဲဒါကိုပဲ ဂမ်ဘီယာ ဖက်က တနင်္လာနေ့မှာ ပြန်ပြီးတော့ အဆုံးသတ်လျှောက်လဲဖို့ရှိပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် (တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာ ၊ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ) ။. ။ ICJ ကနေပြီးတော့ လက်ခံစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ မြန်မာဖက်က ပြောတာ ဘယ်အချက်တွေကို မူတည်ြ့ပီးတော့ ပြောတာပါလဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း (ဌာနမှူး၊ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း) ။. ။ အဓိကအချက်ကတော့ ၁၉ ၄၈ ခုနှစ် Genocide Convention လို့ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေး ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပေါ့ ။ အဲဒီအထဲမှာပါတဲ့ အဓီက အငြင်းအခုံကတော့ အပိုဒ်ခွဲ ၈ လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ ပြသာနာပေါ်လာခဲ့ရင် စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ဒီစာချုပ်ပါအချက်တွေကို ချိုးဖောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတခုခုကို တင်ပြအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်။ အဲဒီရေးထားတဲ့အချက်ကို ဗမာက ခြွင်းချက်အနေနဲ့ထားပြီး လက်မှတ်ထိုးထားပြီးဖြစ်တယ်။ အဲလိုခြွင်းချက်ထားတဲ့အတွက်ဆိုပြီး မြန်မာက ICJ အနေနဲ့ ဂမ်ဘီယာက တင်ပြထားတာကို လက်ခံလို့မရဘူးဆိုတာကို ငြင်းချက်ပါ။ အစောပိုင်းတုံးကတော့ အပိုဒ်ခွဲ ၉ ဆိုတာရှိတယ်။ သူကအသေးစိတ်ပေါ့နော်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လူမျိုးတုံး ပဋိညာဉ်စာချုပ်တွေ ချိုးဖောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မကြေနပ်ချက် တခုခုရှိလိုရှိရင် ICJ အဖွဲ့ကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားနိုင်တယ် ဆိုပြီးရေးထားတယ်။ ဒီအချက်ကို ဂမ်ဘီယာ က ပြန်ကိုင်ပြီးတော့ ဗမာအစိုးရဟာ အဲဒီတုံးက အပိုဒ်ခွဲ ၈ ကို ခြွင်းချက်ထားပြီးတော့ အပိုဒ်ခွဲ ၉ ကို လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ အဲဒီတော့ အပိုဒ်ခွဲ ၉ အရဆိုရင် ဂမ်ဘီယာ ဟာ ဗမာကိစ္စကို စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။ ဗမာက အခုနောက်ဆုံးငြင်းချက်မှာတော့ အပိုဒ်ခွဲ ၈ ဆိုတဲ့သဘောထဲမှာပါတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာထဲမှာ ICJဆိုတာ မပါဘူးလာပေါ့နော် ။ ICJ ဆိုတာနေတာပဲဆိုပြီးဗမာက ပြန်ငြင်းတယ်။ အလားတူပဲ ဒီလိုအပိုဒ်ခွဲ ၈ ဟာ ဒီလို စကားလုံး အသုံးအနှုန်းနဲ့ ခြုံငုံပြီးတာ့ ပြောပြထားတာ။ သူနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အပိုဒ်ခွဲ ၉ ထဲမှာကြမှ အသေးစိတ်ပေါ့နော်။ ICJ ဆိုပြီးတော့ ထဲထားတာ။ ဒီခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ ပြောပြထားတဲ့ အပိုဒ်ခွဲ ၈ ကို ဗမာက ခြွင်းချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ICJ မှာ ဒီကိစ္စတရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး ဆိုပြီး ပြန်ငြင်းတာ။ အလားတူပဲ ဗမာအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို၁၉ ၄၈ ကတည်းက သေခြာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ပြီး ခြွင်းချက်ထားခဲ့တာ။ ဒီလိုခြွင်းချက်ထားတဲ့ကိစ္စတခုကို ICJ က လျစ်လျှူခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီခြွင်းချက်ဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဘာဖြစ်မလဲ။ ဒီလိုခြွင်းချက်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုမလေးစားရာ ရောက်တယ်ဆိုပြီး သူကပြောတယ်။ တခြားအချက်တွေကိုလည်း ထဲ့ပြောတာရှိပါတယ်။ အဓိကအားဖြစ် အနှစ်ချုပ်ကတော့ ဒီ ICJ မှာ အပိုဒ်ခွဲ ၈ ကို ခြွင်းချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာပါ။
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် (တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာ ၊ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ) ။. ။ ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့ တင်ပြစွဲဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာ ဘာအထောက်အထားတွေနဲ့ ပြောသွားတာလဲ။ ဥပမာ ဆိုရင် Genocide Convention အနေနဲ့ ဂမ်ဘီယာ OIC အတွက် ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာပေါ့။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗမာဖက်က ပြောသွားတာကို နည်းနည်းပြောပြပေးပါအုန်း။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း (ဌာနမှူး၊ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း) ။. ။ ဟုတ်ကဲ အဲဒါက ပထမနေ့တွေကတည်းက ဗမာဖက်က ပြောပါတယ်။ စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တခုအနေနဲ့ ဂမ်ဘီယာက OIC အဖွဲ့ ကို ကိုယ်စားပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ ထင်ရှားပါတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒုတိယနေ့တုံးက ဂမ်ဘီယာ က သူဖက်က အထောက်အထားတွေ မျိုးစုံနဲ့ ရှင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဂမ်ဘီယာ က အချုပ်အခြာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့။ OIC လက်အောက်ခံမဖြစ်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ OIC ကို တင်ပြ အကူအညီယူပြီးတော့ ဒီကိစ္စလုပ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပြောတယ်။ အခုဒီနေ့ နောက်ဆုံး ပြန်ပြီတော့ ငြင်းတဲ့ အခါကြတော့ ဗမာဖက်က အမြင်ကတော့ OIC က သူရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးတွေ၊ အလားတူပဲ OIC ကော်မီတီကိုဖွဲ့တယ်။ ကော်မတီမှာ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကို ခေါင်းဆောင်တင်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဗမာကိစ္စအရေးကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီး ဆုံဖြတ်ချက်ချတယ်။ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရအစည်းအဝေးမှာ ဒီကိစ္စကိုအတည်ပြုပြီးတော့မှ ဂမ်ဘီယာက လုပ်တယ်ပြောတယ်။ ဒီသဘောကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဂမ်ဘီယာက သူပြောတာတွေနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ OIC ကပဲ ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ ဂမ်ဘီယာကို ကိုယ်စားလှယ်နဲ့လုပ်တာ ထင်ရှားပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သူကပြတယ်။ နောက်တချက်က Injured State လိုခေါ်တဲ့ တိုက်ရိုက်နစ်နာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးပေါ့။ သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးပေါ့။ အစောပိုင်း ဂမ်ဘီယာက သူပြောသွားတာက တိုက်ရိုက်နစ်နာတာမရှိပေမယ့်လည်း တာဝန်နဲ့ ဝတ္တရားပေါ့နော်။ Standing of responsibility ။ ဒီ Standing လို့ပြောတဲ့အခါမှာ သူရဲ့တာဝန်ရှိလို့လုပ်တာပေါ့။ စာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုအနေနဲ့ သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။ နိုင်ငံတကာမှာ လူ့အခွင်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်နေတာကို သူနဲ့ တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ဘူး။ ဝေးနေတာကို ရပ်တည်ချက် တာဝန်အတိုင်းလုပ်ရတာပါဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်။ ဗမာဖက်က ဒီနေ့ ပြန်ပြီးတော့ ပြောတာက အထူးသဖြင့်တော့ Nationality of the Identity of The Claim ပေါ့နော်။ ဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အခွင့်အရေး သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြဌာန်းထားတာ့ရှိတယ်။ အဲဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်နဲ့ပဲ ICJ အနေနဲ့ ဆိုဖြတ်ပါဆိုပြီး တခြားဥပဒေအကိုးအကားတွေနဲ့ ပြောတာရှိတယ်။
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် (တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာ ၊ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ) ။. ။ ဂမ်ဘီယာနဲ့ ဗမာအကြားမှာ အငြင်းပွားမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဗုဒ်ဓဟူးနေ့က ဂမ်ဘီယာက ပြောသွားတာရှိတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာဖက်က ဘာတွေပြန်ရှင်းပါသလဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း (ဌာနမှူး၊ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း) ။. ။ ဂမ်ဘီယာဖက်က အဓိက ပြန်ပြောတာကတော့ သူက ကုလသမဂ္ဂမှာလည်း အထွေထွေညီလာခံမှာ သူပြောတယ်။ အလားတူပဲ OIC က Statement တွေထုတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဗမာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ပြန်ပြီးတော့ ကန့်ကွက်တဲ့ ကြေညာချက်တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်။ အဲဒါအပြင်ကို နောက်ထပ်က ဘာလဲဆိုတော့ ဂမ်ဘီယာကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂသံရုံးကို စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာရှိတဲ့ စာတဆောင်ပို့ပေးတယ်။ ဗမာက မပြန်ဘူး။ မပြန်တဲ့အပြင်ကို သူက ရက်ပေါင်း ၃ဝ လောက်အထိ ဘာမှမတုံပြန်ဘူးပေါ့နော်။ ဒီလိုမတုံပြန်တာဟာ တကယ်တန်းကြတော့ ဆိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့ အငြင်းပွားမှုကို ညွှန်းဆိုနေတဲ့ဟာပေါ့နော်။ ဒါတွေဟာ မြန်မာနဲ့ ဂမ်ဘီယာအကြားအငြင်းပွားမှုဆိုတာကို ပြောထားတာရှိတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာဖက်က ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့ အငြင်းမှုဆိုတာကို ပြန်ပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်တယ်လေ။ တယောက်နဲ့ တယောက်အငြင်းပွားကြတယ်ဆိုရင် တဖက်ရဲ့ သဘောထားကို သိကြရတယ်။ သိကြရပြီးတော့မှ ဒီအချက်လက်တွေကို ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ မပြေလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားရတာကို။ ဒါပေမယ့် သူက ပြန်ပြီးတော့ စွပ်စွဲတာက ဂမ်ဘီယာအနေနဲ့ လုပ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် "dispute for purpose of court" တရားရုံးတင်ဘို့ရည်ရွယ်ချက်သက်သက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကွက်တွေလို့မြန်မာဘက်ကဥပဒေပညာရှင်တွေက စွပ်စွဲတယ်။ အဲဒါအပြင်ကို ဂမ်ဘီယာကပို့တဲစာထဲမှာ တကယ်တန်း သက်သေ ဥပဒေအကြောင်းအရ အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ စာသားမပါဘူး။ ပြီးတော့ ရက်ပေါင်း ၃ဝ ဆိုတဲ့ကိစ္စက တကယ်တန်း လုံလောက်တဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ အချိန်ယူရမယ်ဆိုတာ အားလုံးနားလည်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ တကယ်ကို အငြင်းပွားမှု တစုံတရာမရှိပဲနဲ့ တရားရုံးတော်ကို ဦးတိုက်လျှောက်ထားတဲ့အတွက်မို့ သူမှာ တရားရုံးအနေနဲ့ လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ တင်ပြသွားပါတယ်။
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် (တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာ ၊ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ) ။. ။ မြန်မာဖက်က ဒုတိယအကြိမ်လျှောက်လဲတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ လာမယ့် တနင်္လာနေ့ကြရင် ဂမ်ဘီယာဖက်က အဆုံးသတ် လျှောက်လဲမှာ။ ဒီနောက်မှာ ICJ ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဦးသန်လွင်ထွန်း ရဲ့ အမြင်ကိုလည်းသိပါရစေ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း (ဌာနမှူး၊ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း) ။. ။ ဒီတခေါက်ကြားနာပွဲက ၂ဖက်ဒီကိစ္စကို ICJ အနေနဲ့ လက်ခံပြီးတော့ ကိုင်တွယ်ဆုံးဖြတ်သင့်မသင့်နဲ့ ဒီထဲမှာ ဟိုအစောပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ကြားဖြတ်အရေးယူမှုတွေလုပ်ပေးဖို့ပဲ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ကြားနာမှုပါ။ အဲတုံးက ဗမာဖက်က ငြင်းဆိုခဲ့တဲ့ အချက်တွေ တင်ပြခဲ့ပေမယ့် ICJ က လက်မခံဘူး။ ICJ ကနေ ဗမာဖက်က လက်နာရမယ့်အချက်တွေ တင်ပြခဲ့တယ်။ အခုတခေါက်ငြင်းဆိုတင်ပြတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်း ဂမ်ဘီယာ က ဘာကို ကိုးကားလာလည်းဆိုတော့ ပထမတကြိမ်တုံးကလည်း ICJ က ဆုံးဖြတ်ပြီးသားလို့ပြောတယ်။ ပြောတော့ ဗမာက ဟိုတချိန်က ဆုံးဖြတ်တာနဲ့ ဒီတခေါက် ကြားနာတာ မတူတဲ့အတွက်ကြောင့် ဟိုတခေါက်ဆုံးဖြတ်တာတွေကို ပြီးသွားပြီဆိုတာကို ပြောလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒါအပြင် ဗမာဖက်က ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတဲ့အချက်က အခုဟာက တရားရုံးက လက်ခံသင့် မခံသင့်ဆိုတာကိုပဲ ငြင်းနေကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာဂမ်ဘီယာက ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု Genocide ကျူးလွန်မှုဆိုတဲ့ဟာတွေကို သက်သေပြရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပဲနဲ့ အတင်းအကြပ် နာမည်တွေနဲ့ ထဲ့သွင်းပြောကြားလာတာကို သူတွေ့ရတယ်။ အဲတော့ ဒါတွေက တရားရုံးကို မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို အတင်းထိုးသွင်းပြီးတော့ အကြပ်ကိုင်သလိုဖြစ်နေပါတယ်ပေါ့လို့ ဗမာဖက်က ပြောထားတာရှိတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေ။ အဓိကအားဖြင့်တော့ နုတ်အားဖြင့် ကြားနာမှုအပြင်ကို စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့တင်သွင်းထားတာကို ICJ အနေနဲ့ လက်ခံမယ် လက်မခံဘူးဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ လက်မခံဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ ဒီိကိစ္စပြီးသွားပြီ။ လက်ခံမယ်ဆိုပြီး ဒီက်ိစ္စကြားနာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီ။ စွပ်စွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် တဖက်ကလည်း ဂမ်ဘီယာကလည်း သူရဲ့ သက်သေတွေတင်ပြရမယ်။ မြန်မာဖက်ကလည်း မမှန်ကြောင်းချေပမှုတွေလုပ်ရမယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ဒီကိစ္စတွေဟာ နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာတဲ့ကိစ္စတွေပါ။
ဒေါ်ခင်မျိုးသက် (တာဝန်ကျ အယ်ဒီတာ ၊ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း ) ။. ။ လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာလည်း တရားရုံးကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးသန်းလွင်ထွန်း ကို တရားရုံးက အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းပါရစေ။
မွနျမာနဲ့ ဂမျဘီယာအမှု ICJ လကျခံစီရငျခှငျ့မရှိသလို ဂမျဘီယာကလညျး စှဲဆိုခှငျ့မရှိ ( မွနျမာကိုယျစားလှယျ)
ဖဖေျောဝါရီ ၂၅ရကျနေ့ သောကွာနကေ့ နယျသာလနျနိုငျငံ သဟိဘျမွို့ ICJ တရားရုံးမှာ ဂမျဘီယာ နဲ့ မွနျမာအမှု တတိယနေ့ ကွားနာပှဲအတှငျး ICJ အနနေဲ့ ဒီအမှုကို လကျခံ စီရငျပိုငျခှငျ့မရှိသလို ဂမျဘီယာအနနေဲ့လညျး တငျပွစှဲဆိုပိုငျခှငျ့မရှိဘူးလို့ မွနျမာဖကျက ခပြေသှားပါတယျ။ ဗုဒျဓဟူးနကေ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ဒုတိယနကွေ့ားနာပှဲမှာတော့ မွနျမာဖကျက ဘယျလိုခပြေခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အသေးစိတျကိုတော့ ဗှီအိုအေ ဌာနမှူး ဦးသနျးလှငျထှနျး ကို တာဝနျကြ အယျဒီတာ ဒျေါခငျမြိုးသကျ က မေးမွနျးထားပါတယျ။
ဒျေါခငျမြိုးသကျ (တာဝနျကြ အယျဒီတာ ၊ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး ) ။. ။ အဓိက မွနျမာဖကျက ဘာတှေ လြှောကျလဲခဲသလဲ ဆိုတာ ပထမဆုံး ပွောပွပေးပါ။
ဦးသနျးလှငျထှနျး (ဌာနမှူး၊ ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး) ။. ။ ဟုတျကဲ သောကွာနကေ့တော့ ဗမာဖကျက ဒုတိယအကွိမျနဲ့ အဆုံးသတျ လြှောကျလဲခကျြပါ။ ပထမဦးဆုံး ၂၁ ရကျနကေ့ လြှောကျလဲခကျြတှမှော အခကျြ ၄ ခကျြကို ပွောခဲ့တယျ။ အဲဒါပွီးတော့ ဂမျဘီယာဖကျကနေ ပွနျလညျခပြေတယျ။ အခု ဗမာဖကျက အဆုံးသတျလြှောကျလဲခကျြမှာတော့ အဓိကအားဖွငျ့ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ဦးကိုကိုလှိုငျ ရဲ့ တငျပွခကျြအရဆိုရငျတော့ ၂ ခကျြပဲ။ ICJ တရားရုံးအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံကနပွေီးတော့ ခြှငျးခကျြထားတဲ့ ပုဒျမ ပုဒျခှဲ၈ အရ ဒါက လကျခံနိုငျခှငျ့မရှိဘူးဆိုတဲ့အခကျြရယျ။ နံပတျ ၂ အခကျြက ဂမျဘီယာအနနေဲ့လညျး မွနျမာနိုငျငံကို စှဲခကျြတငျခှငျ့မရှိဘူးဆိုတဲ့အခကျြ။ ဒီ ၂ခကျြကိုပဲ မွနျမာနိုငျငံက ငွငျးပွီးတော့ ICJ အနနေဲ့ ဆုံးဖွတျပေးပါဆိုပွီးတော့ သီးသနျ့လြှောကျလှဲခဲ့တာပါ။ အဲဒါကိုပဲ ဂမျဘီယာ ဖကျက တနင်ျလာနမှေ့ာ ပွနျပွီးတော့ အဆုံးသတျလြှောကျလဲဖို့ရှိပါတယျ။
ဒျေါခငျမြိုးသကျ (တာဝနျကြ အယျဒီတာ ၊ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး ) ။. ။ ICJ ကနပွေီးတော့ လကျခံစီရငျပိုငျခှငျ့မရှိဘူးဆိုပွီးတော့ မွနျမာဖကျက ပွောတာ ဘယျအခကျြတှကေို မူတညျွ့ပီးတော့ ပွောတာပါလဲ။
ဦးသနျးလှငျထှနျး (ဌာနမှူး၊ ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး) ။. ။ အဓိကအခကျြကတော့ ၁၉ ၄၈ ခုနှဈ Genocide Convention လို့ချေါတဲ့ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှု တားဆီးရေး ပဋိညာဉျစာခြုပျပေါ့ ။ အဲဒီအထဲမှာပါတဲ့ အဓီက အငွငျးအခုံကတော့ အပိုဒျခှဲ ၈ လို့ချေါပါတယျ။ အဲဒီမှာ ဘာပွောထားလဲဆိုတော့ ပွသာနာပျေါလာခဲ့ရငျ စာခြုပျကို လကျမှတျထိုးထားတဲ့ နိုငျငံတှအေနနေဲ့ ဒီစာခြုပျပါအခကျြတှကေို ခြိုးဖောကျနတေဲ့နိုငျငံတှရှေိနတေယျဆိုလို့ရှိရငျ ကုလသမဂ်ဂလကျအောကျခံ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးတခုခုကို တငျပွအရေးယူပိုငျခှငျ့ရှိတယျလို့ရေးထားတယျ။ အဲဒီရေးထားတဲ့အခကျြကို ဗမာက ခွှငျးခကျြအနနေဲ့ထားပွီး လကျမှတျထိုးထားပွီးဖွဈတယျ။ အဲလိုခွှငျးခကျြထားတဲ့အတှကျဆိုပွီး မွနျမာက ICJ အနနေဲ့ ဂမျဘီယာက တငျပွထားတာကို လကျခံလို့မရဘူးဆိုတာကို ငွငျးခကျြပါ။ အစောပိုငျးတုံးကတော့ အပိုဒျခှဲ ၉ ဆိုတာရှိတယျ။ သူကအသေးစိတျပေါ့နျော။ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှအေနနေဲ့ လူမြိုးတုံး ပဋိညာဉျစာခြုပျတှေ ခြိုးဖောကျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ မကွနေပျခကျြ တခုခုရှိလိုရှိရငျ ICJ အဖှဲ့ကို ဦးတိုကျလြှောကျထားနိုငျတယျ ဆိုပွီးရေးထားတယျ။ ဒီအခကျြကို ဂမျဘီယာ က ပွနျကိုငျပွီးတော့ ဗမာအစိုးရဟာ အဲဒီတုံးက အပိုဒျခှဲ ၈ ကို ခွှငျးခကျြထားပွီးတော့ အပိုဒျခှဲ ၉ ကို လကျမှတျထိုးထားတယျ။ အဲဒီတော့ အပိုဒျခှဲ ၉ အရဆိုရငျ ဂမျဘီယာ ဟာ ဗမာကိစ်စကို စီရငျပိုငျခှငျ့ရှိတယျလို့ပွောထားတယျ။ ဗမာက အခုနောကျဆုံးငွငျးခကျြမှာတော့ အပိုဒျခှဲ ၈ ဆိုတဲ့သဘောထဲမှာပါတဲ့ ကုလသမဂ်ဂလကျအောကျခံ သကျဆိုငျရာ နိုငျငံတကာ အဖှဲ့အစညျးဆိုတာထဲမှာ ICJဆိုတာ မပါဘူးလာပေါ့နျော ။ ICJ ဆိုတာနတောပဲဆိုပွီးဗမာက ပွနျငွငျးတယျ။ အလားတူပဲ ဒီလိုအပိုဒျခှဲ ၈ ဟာ ဒီလို စကားလုံး အသုံးအနှုနျးနဲ့ ခွုံငုံပွီးတာ့ ပွောပွထားတာ။ သူနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ အပိုဒျခှဲ ၉ ထဲမှာကွမှ အသေးစိတျပေါ့နျော။ ICJ ဆိုပွီးတော့ ထဲထားတာ။ ဒီခွုံငုံသုံးသပျပွီးတော့ ပွောပွထားတဲ့ အပိုဒျခှဲ ၈ ကို ဗမာက ခွှငျးခကျြထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ ICJ မှာ ဒီကိစ်စတရားစှဲဆိုပိုငျခှငျ့မရှိဘူး ဆိုပွီး ပွနျငွငျးတာ။ အလားတူပဲ ဗမာအနနေဲ့ ဒီကိစ်စကို၁၉ ၄၈ ကတညျးက သခွောစဉျးစားသုံးသပျခဲ့ပွီး ခွှငျးခကျြထားခဲ့တာ။ ဒီလိုခွှငျးခကျြထားတဲ့ကိစ်စတခုကို ICJ က လဈြလြှူခဲ့တယျဆိုရငျတော့ ဒီခွှငျးခကျြဆိုတာရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို ဘာဖွဈမလဲ။ ဒီလိုခွှငျးခကျြထားတဲ့ နိုငျငံတှကေိုမလေးစားရာ ရောကျတယျဆိုပွီး သူကပွောတယျ။ တခွားအခကျြတှကေိုလညျး ထဲ့ပွောတာရှိပါတယျ။ အဓိကအားဖွဈ အနှဈခြုပျကတော့ ဒီ ICJ မှာ အပိုဒျခှဲ ၈ ကို ခွှငျးခကျြထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ တရားစီရငျပိုငျခှငျ့မရှိဘူးလို့ပွောတာပါ။
ဒျေါခငျမြိုးသကျ (တာဝနျကြ အယျဒီတာ ၊ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး ) ။. ။ ဂမျဘီယာအနနေဲ့ တငျပွစှဲဆိုပိုငျခှငျ့မရှိဘူးဆိုတာ ဘာအထောကျအထားတှနေဲ့ ပွောသှားတာလဲ။ ဥပမာ ဆိုရငျ Genocide Convention အနနေဲ့ ဂမျဘီယာ OIC အတှကျ ဆောငျရှကျနတေယျဆိုတာပေါ့။ ဒါတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ဗမာဖကျက ပွောသှားတာကို နညျးနညျးပွောပွပေးပါအုနျး။
ဦးသနျးလှငျထှနျး (ဌာနမှူး၊ ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး) ။. ။ ဟုတျကဲ အဲဒါက ပထမနတှေ့ကေတညျးက ဗမာဖကျက ပွောပါတယျ။ စာခြုပျလကျမှတျထိုးထားတဲ့ အဖှဲ့ဝငျတခုအနနေဲ့ ဂမျဘီယာက OIC အဖှဲ့ ကို ကိုယျစားပွုလုပျတယျဆိုတာကတော့ ထငျရှားပါတယျပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒုတိယနတေုံ့းက ဂမျဘီယာ က သူဖကျက အထောကျအထားတှေ မြိုးစုံနဲ့ ရှငျးပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဂမျဘီယာ က အခြုပျအခွာနိုငျငံဖွဈတယျပေါ့။ OIC လကျအောကျခံမဖွဈဘူး။ သူကိုယျတိုငျ ဦးဆောငျပွီးတော့မှ OIC ကို တငျပွ အကူအညီယူပွီးတော့ ဒီကိစ်စလုပျရပါတယျဆိုတဲ့ သဘောပွောတယျ။ အခုဒီနေ့ နောကျဆုံး ပွနျပွီတော့ ငွငျးတဲ့ အခါကွတော့ ဗမာဖကျက အမွငျကတော့ OIC က သူရဲ့နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအစညျးအဝေးတှေ၊ အလားတူပဲ OIC ကျောမီတီကိုဖှဲ့တယျ။ ကျောမတီမှာ ဂမျဘီယာနိုငျငံကို ခေါငျးဆောငျတငျတယျ။ ပွီးတော့မှ ဗမာကိစ်စအရေးကို ဆကျလကျ လုပျဆောငျဖို့ဆိုပွီး ဆုံဖွတျခကျြခတြယျ။ ဂမျဘီယာနိုငျငံရဲ့ အစိုးရအစညျးအဝေးမှာ ဒီကိစ်စကိုအတညျပွုပွီးတော့မှ ဂမျဘီယာက လုပျတယျပွောတယျ။ ဒီသဘောကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ ဂမျဘီယာက သူပွောတာတှနေဲ့ ပွောငျးပွနျဖွဈနတေယျ။ OIC ကပဲ ခေါငျးဆောငျပွီးတော့ ဂမျဘီယာကို ကိုယျစားလှယျနဲ့လုပျတာ ထငျရှားပါတယျဆိုတဲ့အခကျြကို သူကပွတယျ။ နောကျတခကျြက Injured State လိုချေါတဲ့ တိုကျရိုကျနဈနာတဲ့နိုငျငံမဟုတျဘူးပေါ့။ သကျဆိုငျမှုမရှိဘူးပေါ့။ အစောပိုငျး ဂမျဘီယာက သူပွောသှားတာက တိုကျရိုကျနဈနာတာမရှိပမေယျ့လညျး တာဝနျနဲ့ ဝတ်တရားပေါ့နျော။ Standing of responsibility ။ ဒီ Standing လို့ပွောတဲ့အခါမှာ သူရဲ့တာဝနျရှိလို့လုပျတာပေါ့။ စာခြုပျအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတခုအနနေဲ့ သူနဲ့မဆိုငျဘူးလို့ပွောလို့မရဘူးပေါ့။ နိုငျငံတကာမှာ လူ့အခှငျအရေး ခြိုးဖောကျမှုတှဖွေဈနတောကို သူနဲ့ တိုကျရိုကျမပတျသကျဘူး။ ဝေးနတောကို ရပျတညျခကျြ တာဝနျအတိုငျးလုပျရတာပါဆိုပွီးတော့ ပွောတယျ။ ဗမာဖကျက ဒီနေ့ ပွနျပွီးတော့ ပွောတာက အထူးသဖွငျ့တော့ Nationality of the Identity of The Claim ပေါ့နျော။ ဒီလိုလုပျပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ နိုငျငံတှရေဲ့ အခှငျ့အရေး သတျမှတျခကျြတှေ ပွဌာနျးထားတာ့ရှိတယျ။ အဲဒီသတျမှတျထားတဲ့အခကျြနဲ့ပဲ ICJ အနနေဲ့ ဆိုဖွတျပါဆိုပွီး တခွားဥပဒအေကိုးအကားတှနေဲ့ ပွောတာရှိတယျ။
ဒျေါခငျမြိုးသကျ (တာဝနျကြ အယျဒီတာ ၊ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး ) ။. ။ ဂမျဘီယာနဲ့ ဗမာအကွားမှာ အငွငျးပှားမှုရှိခဲ့တယျဆိုပွီး ဗုဒျဓဟူးနကေ့ ဂမျဘီယာက ပွောသှားတာရှိတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး မွနျမာဖကျက ဘာတှပွေနျရှငျးပါသလဲ။
ဦးသနျးလှငျထှနျး (ဌာနမှူး၊ ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး) ။. ။ ဂမျဘီယာဖကျက အဓိက ပွနျပွောတာကတော့ သူက ကုလသမဂ်ဂမှာလညျး အထှထှေညေီလာခံမှာ သူပွောတယျ။ အလားတူပဲ OIC က Statement တှထေုတျတဲ့အခါမှာလညျး ဗမာနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနကနေ ပွနျပွီးတော့ ကနျ့ကှကျတဲ့ ကွညောခကျြတှထေုတျထားတာရှိတယျ။ အဲဒါအပွငျကို နောကျထပျက ဘာလဲဆိုတော့ ဂမျဘီယာကနပွေီးတော့ မွနျမာနိုငျငံ ကုလသမဂ်ဂသံရုံးကို စာမကျြနှာ ၂ မကျြနှာရှိတဲ့ စာတဆောငျပို့ပေးတယျ။ ဗမာက မပွနျဘူး။ မပွနျတဲ့အပွငျကို သူက ရကျပေါငျး ၃ဝ လောကျအထိ ဘာမှမတုံပွနျဘူးပေါ့နျော။ ဒီလိုမတုံပွနျတာဟာ တကယျတနျးကွတော့ ဆိတျဆိတျနပွေီးတော့ အငွငျးပှားမှုကို ညှနျးဆိုနတေဲ့ဟာပေါ့နျော။ ဒါတှဟော မွနျမာနဲ့ ဂမျဘီယာအကွားအငွငျးပှားမှုဆိုတာကို ပွောထားတာရှိတယျ။ ဒီနေ့ မွနျမာဖကျက ဥပဒပေညာရှငျတှကေတော့ အငွငျးမှုဆိုတာကို ပွနျပွီးတော့ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့တယျလေ။ တယောကျနဲ့ တယောကျအငွငျးပှားကွတယျဆိုရငျ တဖကျရဲ့ သဘောထားကို သိကွရတယျ။ သိကွရပွီးတော့မှ ဒီအခကျြလကျတှကေို ညှိနှိုငျးပွီးတော့မှ မပွလေညျနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ သကျဆိုငျရာ တရားရုံးကို ဦးတိုကျလြှောကျထားရတာကို။ ဒါပမေယျ့ သူက ပွနျပွီးတော့ စှပျစှဲတာက ဂမျဘီယာအနနေဲ့ လုပျလာတဲ့အခွအေနတှေကေို ကွညျ့မယျဆိုလို့ရှိရငျ "dispute for purpose of court" တရားရုံးတငျဘို့ရညျရှယျခကျြသကျသကျနဲ့ လုပျဆောငျခဲ့တဲ့အကှကျတှလေို့မွနျမာဘကျကဥပဒပေညာရှငျတှကေ စှပျစှဲတယျ။ အဲဒါအပွငျကို ဂမျဘီယာကပို့တဲစာထဲမှာ တကယျတနျး သကျသေ ဥပဒအေကွောငျးအရ အရေးယူမယျဆိုတဲ့ စာသားမပါဘူး။ ပွီးတော့ ရကျပေါငျး ၃ဝ ဆိုတဲ့ကိစ်စက တကယျတနျး လုံလောကျတဲ့အခြိနျလညျးမဟုတျပဲနဲ့ အခြိနျယူရမယျဆိုတာ အားလုံးနားလညျနိုငျပါတယျပေါ့နျော။ အဲဒီတော့ ဒီလိုကိစ်စမြိုးမှာ တကယျကို အငွငျးပှားမှု တစုံတရာမရှိပဲနဲ့ တရားရုံးတျောကို ဦးတိုကျလြှောကျထားတဲ့အတှကျမို့ သူမှာ တရားရုံးအနနေဲ့ လကျခံနိုငျစရာအကွောငျးမရှိဘူးလို့ တငျပွသှားပါတယျ။
ဒျေါခငျမြိုးသကျ (တာဝနျကြ အယျဒီတာ ၊ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး ) ။. ။ မွနျမာဖကျက ဒုတိယအကွိမျလြှောကျလဲတာပွီးသှားပွီပေါ့နျော။ လာမယျ့ တနင်ျလာနကွေ့ရငျ ဂမျဘီယာဖကျက အဆုံးသတျ လြှောကျလဲမှာ။ ဒီနောကျမှာ ICJ ရဲ့ အဆုံးအဖွတျနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဦးသနျလှငျထှနျး ရဲ့ အမွငျကိုလညျးသိပါရစေ။
ဦးသနျးလှငျထှနျး (ဌာနမှူး၊ ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး) ။. ။ ဒီတခေါကျကွားနာပှဲက ၂ဖကျဒီကိစ်စကို ICJ အနနေဲ့ လကျခံပွီးတော့ ကိုငျတှယျဆုံးဖွတျသငျ့မသငျ့နဲ့ ဒီထဲမှာ ဟိုအစောပိုငျးက ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုယျတိုငျ ကွားဖွတျအရေးယူမှုတှလေုပျပေးဖို့ပဲ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ ကွားနာမှုပါ။ အဲတုံးက ဗမာဖကျက ငွငျးဆိုခဲ့တဲ့ အခကျြတှေ တငျပွခဲ့ပမေယျ့ ICJ က လကျမခံဘူး။ ICJ ကနေ ဗမာဖကျက လကျနာရမယျ့အခကျြတှေ တငျပွခဲ့တယျ။ အခုတခေါကျငွငျးဆိုတငျပွတဲ့ကိစ်စတှမှောလညျး ဂမျဘီယာ က ဘာကို ကိုးကားလာလညျးဆိုတော့ ပထမတကွိမျတုံးကလညျး ICJ က ဆုံးဖွတျပွီးသားလို့ပွောတယျ။ ပွောတော့ ဗမာက ဟိုတခြိနျက ဆုံးဖွတျတာနဲ့ ဒီတခေါကျ ကွားနာတာ မတူတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဟိုတခေါကျဆုံးဖွတျတာတှကေို ပွီးသှားပွီဆိုတာကို ပွောလို့မရဘူးလို့ပွောတယျ။ ဒါအပွငျ ဗမာဖကျက ပွငျးပွငျးထနျထနျပွောတဲ့အခကျြက အခုဟာက တရားရုံးက လကျခံသငျ့ မခံသငျ့ဆိုတာကိုပဲ ငွငျးနကွေတယျ။ ဒီအခြိနျမှာဂမျဘီယာက ဗမာပွညျမှာ ဖွဈတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှု Genocide ကြူးလှနျမှုဆိုတဲ့ဟာတှကေို သကျသပွေရမယျ့အခြိနျမဟုတျပဲနဲ့ အတငျးအကွပျ နာမညျတှနေဲ့ ထဲ့သှငျးပွောကွားလာတာကို သူတှရေ့တယျ။ အဲတော့ ဒါတှကေ တရားရုံးကို မလိုအပျတဲ့အခြိနျမှာ မလိုအပျတဲ့အရာတှကေို အတငျးထိုးသှငျးပွီးတော့ အကွပျကိုငျသလိုဖွဈနပေါတယျပေါ့လို့ ဗမာဖကျက ပွောထားတာရှိတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ကနြျောတို့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပေါ့လေ။ အဓိကအားဖွငျ့တော့ နုတျအားဖွငျ့ ကွားနာမှုအပွငျကို စာရှကျစာတမျးတှနေဲ့တငျသှငျးထားတာကို ICJ အနနေဲ့ လကျခံမယျ လကျမခံဘူးဆိုတာကို ဆုံးဖွတျပါလိမျ့မယျ။ လကျမခံဘူးလို့ဆုံးဖွတျလိုကျရငျတော့ ဒီကိစ်စပွီးသှားပွီ။ လကျခံမယျဆိုပွီး ဒီကိစ်စကွားနာမယျဆိုရငျတော့ ဒါက လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုနဲ့ စှပျစှဲတယျဆိုတဲ့အဆငျ့ရောကျသှားပွီ။ စှပျစှဲတယျဆိုလို့ရှိရငျ တဖကျကလညျး ဂမျဘီယာကလညျး သူရဲ့ သကျသတှေတေငျပွရမယျ။ မွနျမာဖကျကလညျး မမှနျကွောငျးခပြေမှုတှလေုပျရမယျ။ မြားသောအားဖွငျ့တော့ ဒီကိစ်စတှဟော နှဈနဲ့ခြီပွီးကွာတဲ့ကိစ်စတှပေါ။
ဒျေါခငျမြိုးသကျ (တာဝနျကြ အယျဒီတာ ၊ဗှီအိုအေ မွနျမာပိုငျး ) ။. ။ လာမယျ့တနင်ျလာနမှေ့ာလညျး တရားရုံးကအခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး ဦးသနျးလှငျထှနျး ကို တရားရုံးက အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျပွီးမေးမွနျးပါရစေ။